Mogadishu Journal » 2018 » July » 4
Mjournal : -Saddex Alifle Boliska Soomaaliyeed Saciid Cumar Cusmaan ayaa loo soo qabtay in uu ka dambeeyay amar diido iyo isku day dil uu ku qaarijin lahaa taliyiiisa, waxaana Ciiamada amniga ay ku soo wareejiyeen Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida 05/05 ee sanadkan....
On behalf of the Government and the people of Somalia, I extend my cordial congratulations to the nation and the great people of America on this special day of independence. The United States of America is a valuable supporter and ally of Somalia in many areas of mutual benefit....
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa daah-furay kulanka wadatashiga Qorshe wadaagga guddiga wada xaajoodka iyo Hey’adaha ku shaqada leh siyaasadda loo dhanyahay oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Ra’iisul Wasaare...
Mjournal :-Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa warqad uu soo saaray wuxuu amar ku siiyay bulshada ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka xoolaha heesta ee xoolahooda magaalada u soo daaqsima taga. Duqa...
Khasaaraha ka dhashay qarax Al-shabaab ay la eegteen ciidamada Kenya
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ciidan ka tiran Booliska Kenya shalay gelinkii dambe lagula eegtay deegaanka Lafey oo hoosyimaada degmada Mandheera oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Ilo xog ogaal ah ayaa waxa ay sheegeen in qarax Miino uu...
Madaxweyne Farmaajo oo dalacsiiyay saraakiil ka tirsan ciidamada Booliska
Mjounal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalay Xarunta Madaxtooyada ugu sameeyay casho sharaf Guddigii Qabanqaabada Munaasabadihii 26ka Juunyo iyo 1-da Luuliyo. Madaxweyne Farmaajo oo hadal kooban oo mahadnaq ah goobta ka jeediyay ayaa ugu horreyn uga...